Ny fahafatesan'ny COVID-10 any Rosia tamin'ny volana septambra dia avo roa heny ny tarehimarika ofisialy momba ny governemanta
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Ny fahafatesan'ny COVID-10 any Rosia tamin'ny volana septambra dia avo roa heny ny tarehimarika ofisialy momba ny governemanta
Ny fahafatesan'ny COVID-10 any Rosia tamin'ny volana septambra dia avo roa heny ny tarehimarika ofisialy momba ny governemanta.
Ny governemanta Rosiana dia voampanga ho manamaivana ny fiantraikan'ny valan'aretina coVID-19 ao amin'ny firenena.
Efa ho 19 ny isan'ny maty COVID-450,000 any Rosia - ny avo indrindra any Eropa ankehitriny.
Na eo aza ny fitalahoana avy amin'i Putin sy ny fisian'ny vaksiny an-trano, ny 32% amin'ny Rosiana ihany no vita vaksiny tanteraka.
Nakaton'i Moskoa ny serivisy tsy ilaina nandritra ny 11 andro tamin'ny alakamisy satria miady amin'ny firongatry ny viriosy ny firenena.
Olona 44,265 no matin'ny COVID-19 tany Rosia tamin'ny volana septambra, araka ny filazan'ny Rosstat (Sampan-draharaha federaly momba ny antontan'isa).
Ny isa dia mbola tsy ampy tamin'ny firaketana isam-bolana any Rosia momba ny fahafatesan'ny coronavirus maherin'ny 50,000 tamin'ny Jolay, saingy efa ho avo roa heny ny tombantomban'ny governemanta Rosiana ofisialy.
Nilaza ny tally ofisialin'ny governemanta fa i Russia dia nahita fahafatesan'olona 24,031 tamin'ny volana septambra.
Ny tarehimarika vaovao dia mitondra ny isan'ny fahafatesan'ny coronavirus any Rosia ho efa ho 450,000, ny isa ambony indrindra any Eropa.
Ny governemanta Rosiana dia voampanga ho manamaivana ny fiantraikan'ny valan'aretina COVID-19 ao amin'ny firenena ary ny endrik'i Rosstat - navoaka tamin'ny zoma lasa teo - dia nandoko sary maizina kokoa noho ny nasehon'ny tarehimarika ofisialy.
Ny tarehimarika ofisialin'ny governemanta Rosiana dia tsy miraharaha afa-tsy ny fahafatesan'ny olona izay nametrahana ilay viriosy ho antony voalohany nahafaty azy taorian'ny autopsy.
Rosstat, na izany aza, dia mamoaka tarehimarika amin'ny famaritana midadasika kokoa ho an'ny fahafatesana mifandray amin'ny virus.
Rosia no firenena voa mafy indrindra any Eropa noho ny areti-mifindra, miaraka amin'ny manampahefana miady mafy manohitra ny fihetseham-po manohitra ny vaksiny.
Na dia eo aza ny fitalahoana nataon'ny Filohan'i Rosia Putin sy ny fisian'ny jabs an-tanindrazana, ny 32%-n'ny Rosiana ihany no vita vaksiny tanteraka.
Moscow nakatona ny serivisy tsy ilaina mandritra ny 11 andro amin'ny alakamisy satria miady amin'ny firongatry ny viriosy ny firenena, tarihin'ny tahan'ny vaksiny ambany.
Rosia dia nahatratra 1,163 ny fahafatesan'ny COVID-19 omaly.
Putin dia nanome baiko ny 'herinandro tsy misy karama' manerana ny firenena (mba hialana amin'ny fampiasana ny fe-potoana 'hidy' tsy malaza) manomboka ny asabotsy ho ezaka hanakanana ny fihanaky ny viriosy.